ए डिभिजन लिग : विभागीय डर्बी बराबरीमा सकियो - Sankalpa Khabar
3. स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सत्तारुढ दलबीच सहमति : उपसभापति गुरुङ
4. भारतका खेसरीलाल नेपालकाे महाेत्सवमा नआउदा चारवटा स्कर्पियाे र ५० स्कुटर जलाइयाे
6. फाइभजीका कारण अमेरिकामा सयौं उडान प्रभावित हुने चेतावनी
ए डिभिजन लिग : विभागीय डर्बी बराबरीमा सकियो
६ मंसिर १५:२८
काठमाडौं।सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगअन्तर्गत सोमबार भएको विभागीय डर्बीमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले १–१ गोलको बराबरी खेलेका छन् । लिगको पहिलो खेलमै साविक उपविजेता आर्मीले ३ अंक लिने मौका गुमाएको छ ।
तीन पटकको च्याम्पियन पुलिसलाई खेल अवधिभर दबाबमा राखेको आर्मीले दोस्रो हाफको सुरुवातमै गोल खाएको थियो । आर्मीका राइट ब्याक गौतम श्रेष्ठले ५०औं मिनेटमा विपक्षी टोलीका बुद्ध बल तामाङलाई फाउल गरेसँगै पुलिसले फ्रि-किक पाएको थियो । तामाङले ५१औं मिनेटमा दायाँतर्फबाट प्रहार गरेको फ्रि-किकमा पुलिसका डिफेन्डर सन्तोष हेमरुनले हेडरमार्फत गोल गर्दै नेपाल पुलिस क्लबलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
त्यसको ११ मिनेट नबित्दै आर्मीका सब्स्टिच्युट खेलाडी विवेक बस्नेतले पेनाल्टी एरियाको ठिक अगाडिबाट सुन्दर बराबरी गोल फर्काएका थिए । पुलिसविरुद्ध १-० ले पछि परेसँगै पुलिसको रक्षापंक्तिमाथि निरन्तर आक्रमण गरेको आर्मीले गोलपछि पनि लगातार गोलका लागि प्रयास गरेको थियो ।
सुरूवातमा ठूला मौका सृजना हुन नसके पनि १०औं मिनेटमा आर्मीका फरवार्ड जर्ज प्रिन्स कार्कीले पेनाल्टी एरिया बाहिरबाट गरेको प्रहार टार्गेटमा थिएन । १४औं मिनेटमा जर्ज प्रिन्स गरेको सुन्दर क्रसमा आर्मीका कप्तान भरत खवासले ६ यार्ड बक्स नजिकबाट गरेको प्रहार बाहिरिएको थियो । जर्ज प्रिन्सले बायाँतर्फबाट दिएको डेलिभरलाई कप्तान भरतले कन्भर्ट गर्न नसक्दा आर्मीले अग्रता लिने मौका गुमाएको थियो ।
सुरुवाती २९ मिनेटसम्म आर्मीविरुद्व दबाबमा परेको पुलिसका लागि १८औं मिनेटमा सुमन लामाले करिब ३० यार्ड टाढाबाट गरेको प्रहार क्रसबारको नजिकैबाट बाहिरिएको थियो । पुलिसका अन्जन राईले २२औं मिनेटमा आर्मीका मिडफिल्डर सन्तोष तामाङमाथि खराब फाउल गर्दै फ्रि-किक दिएका थिए । तर, जर्ज प्रिन्सले १८ यार्ड बक्स ठिक अगाडिबाट गरेको फितलो प्रहारले पुलिसको डिफेन्सिभ वालसमेत पार गर्न सकेन ।
आर्मीका सेसेहाङ आङ्देम्बेले ४३औं मिनेटमा करिब ३५ यार्ड टाढाबाट गरेको सशक्त प्रहार पुलिसका गोलकिपर सत्रुघन चौधरीले बचाएका थिए । २०७६ सालमा भएको लिगको अन्तिम संस्करणमा आर्मीले पुलिसविरुद्ध ४–२ को रोमाञ्चक जित निकालेको थियो । त्यो नाटकीय खेलको ७६औं मिनेटसम्म २–१ गोलको नतिजामा पछाडि परेको आर्मीले निर्धारित समयको बाँकी १३ मिनेटमा तीन गोल ठोकेको थियो ।
यद्यपि, यसपालि भने कम आकेको पुलिसविरुद्ध आर्मीले तीन अंक जोड्न सकेन । यद्यपि, पुलिसले भने उपाधि दावेदार मानिएको आर्मीसँग १ अंक खोसेको छ । खेलको म्यान अफ दि म्याच आर्मीका मिडफिल्डर सेसेहाङ आङदेम्बे भए । शुक्रबारबाट सुरू भएको लिगको जारी संस्करणमा यो तेस्रो बराबरी हो । यसअघि उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी सातदोबाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्बलले गोलरहित बराबरी खेलेका थिए ।
यस्तै, शनिबार भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र संकटा क्लबले १–१ गोलको बराबरी खेलेका थिए । शनिबारको दोस्रो खेलमा थ्री स्टार क्लबले च्यासल युथ क्लबमाथि ३–० को फराकिलो नतिजामा पराजित गरेका थियो । आइतबार भएको पहिलो खेलमा ब्रिगेड ब्वाइज क्लबले एपीएफविरुद्ध ३–२ तथा दोस्रो खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्बलले जावलाखेलमाथि १–० को संघर्षपूर्ण जित निकालेको थियो ।
पहिलो चरणको अन्तिम खेलमा सोमबार साविक विजेता मच्छिन्द्र क्बलले न्युरोड टिम (एनआरटी)सँग खेल्ने छ । दशरथ रंगशालामै ४ः ४५ बजे सुरू हुने खेलाबाट मच्छिन्द्र उपाधि रक्षा अभियान सुरू गर्नेछ ।
क्षितिज लोहनी जसले एप्पल कम्पनीभित्र नेपाली समूह खडा गरे
५ माघ १३:३२
२८ पुष १६:०३
२ माघ १४:५३
१ माघ १०:१७
विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तिकरण नियामावली…
३० पुष १४:४३
संक्रमणदर २७ प्रतिशत पुग्यो
२८ पुष १७:३५
संघियताको कुरुप अनुहार–माघे संक्रान्ति माघ २ मा भन्दै सार्वजनिक…
३० पुष १४:२३
२९ पुष १६:५१
२९ पुष १५:१४
‘चिनियाँ पत्रकारको नजरमा नेपाल’ पुस्तक बजारमा
५ माघ १५:२१